I-china iHDPE iqinise umbhobho ojikelezayo (uhlobo lwe-B) mveliso kunye nabenzi Shengyang
HDPE jiko lwesakhiwo uhlobo udonga B umbhobho ikwabizwa ngokuba iHDPE isakhiwo jiko udonga umbhobho, carat ityhubhu, iHDPE uhlobo jiko umbhobho, uxinano oluphezulu polyethylene jiko umbhobho, uhlobo B ulwakhiwo lombhobho udonga. Luhlobo olutsha lombhobho obhetyebhetye nobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, udonga lwangaphakathi olugudileyo, ukuxhathisa umhlwa, ukuxhathisa ukwaluphala, ukunxiba ukuxhathisa, uxinzelelo lwefuthe, ukumelana nefuthe, ubhetyebhetye obulungileyo, impilo kunye nokhuseleko. Umgangatho we-weld uphezulu, umzimba uqhagamshelwe, umgangatho woqhagamshelo ulungile, akukho ukuvuza, ubomi benkonzo bude, kwaye ulwakhiwo luyakhawuleza kwaye lulula.
Ezona mpawu ziphambili
◎ Isinyithi eshushu sokunyibilikisa sombuso, i-synchronous jiko ngaphakathi nangaphandle kodonga lwesakhiwo, umbhobho iyunifomu iyonke, akukho weld.
◎ Ukusetyenziswa komoya opholileyo, ukugcina ubushushu kumbhobho ngaphakathi ekubumbeni kusasazwe ngokupheleleyo, ngekhe kubangele uxinzelelo lwangaphakathi, akukho delamination kunye nokuqhekeka.
Ukuchithwa kobandayo, ukupholisa umbhobho kwiqondo lokushisa kwegumbi, usebenzisa i-mold shrinkage imodi yokutshabalalisa, umbhobho awuyi kukhubazeka. Kwaye iHDPE engenanto udonga olukujikelezayo umbhobho, ukusetyenziswa kwezixhobo zasekhaya kunye netekhnoloji, uxinizelelo oluphezulu lwe-polyethylene (HDPE) njengezinto ezingafunekiyo, kuManzi-apholileyo, inxeba elinyibilikayo elenzayo, ulwakhiwo lohlobo lwe-A ngokwe-GB / T19472.2-2004 imigaqo Umbhobho wodonga. Kwinkqubo, ityhubhu yesikwere iqala ikhutshiwe, emva koko yenziwe kwaye inxeba ityhubhu ejikelezileyo emva kokuba ipholile ngamanzi.
◎ I-HDPE yoxinano oluphezulu lwe-polyethylene ejikelezayo kwimibhobho eqinisekisiweyo kwimveliso yezinto ezingafunekiyo zisebenza kakhulu, ke ukongeza kwi-2% ye-masterbatch. Ngaphandle kwaleyo, ezinye ziyi-HDPE njengezinto eziphathekayo, ngoko ke ixabiso liphantsi. Kwaye iHDPE engenamngxuma eludongeni jiko olomeleziweyo iyunithi yentsimbi eyomeleleyo iyunithi lukhuni ukuvelisa izinto ezisetyenziswayo ngakumbi, ngoko ke ixabiso liphezulu. Nangona kunjalo, ngenxa yotyalo-mali oluncinci kwizixhobo zemveliso, izithintelo ezisezantsi, ngakumbi ke abavelisi, kukhuphiswano olungalunganga kwimarike, ukuze kufezekiswe iindleko zeNzuzo, inani elikhulu lezinto ezingaphiliyo (i-calcium carbonate) kunye nezinto ezihlaziyiweyo, kukhokelela kumsantsa omkhulu wexabiso lentengiso, kunye nokuhlekisa okuphantsi.
◎ I-HDPE yokujija ityhubhu ephuculweyo isebenzisa uhlobo lwesokethi unxibelelwano lwe-electrofusion (ujongano oluqinileyo), ujongano usebenzisa isokethi kunye ne-electrofusion ngeendlela ezimbini ngaxeshanye. I-HDPE ejikelezayo yombhobho oqinisiweyo onganyangekiyo Kwiindawo apho ukubuyisela umva ngokukhawuleza kufuneka khona, iHDPE imibhobho eqinisiweyo enokusetyenziswa inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Umhlaba wezithende ezininzi zangaphambi kwentsimbi, emva koko ubeke emseleni. Kwaye iHDPE engenanto udonga olukujikelezayo umbhobho usebenzisa (zombane) indlela eshushu yokunyibilikisa, ngenxa yombhobho wezibuko, (umbane) itape eshushu eshushu ayikwazi ukudityaniswa nombhobho ojikelezayo odongeni. Emva kokuba umbhobho ubotshelelwe ngokupheleleyo, ulwakhiwo kufuneka ludityaniswe kumsele, ofuna ukombiwa okukhulu kunye nesantya sokwakha esicothayo. (Umbane) uqhagamshelo lwebhanti eshushu esinyibilikayo, isakhiwo esingasebenzi kakuhle, esidityaniswe nombhobho wokuhambisa umphetho wobude, awunakho ukuziqhelanisa nesiseko esithambileyo okanye iindawo zokuhlala ezingalinganiyo ezibekiweyo.
The Kwinto enye yeHDPE yokubhijela umbhobho oqinisiweyo (uhlobo lwe-B-umbhobho) kunye ne-HDPE umbhobho wodonga (u-A-type pipe), xa kuthelekiswa nombhobho we-B wobungcono ukuba ungcono kunombhobho we-A, ukusetyenziswa kombhobho we-B kungcono Kunombhobho u-A, kwisalathiso esifanayo, ezi ntlobo zimbini zemibhobho Ngokufana nexabiso eliqhelekileyo kufuneka lifane, ixabiso kufuneka lifane, ukusebenza kwexabiso lombhobho wohlobo lwe-B ngokucacileyo kulunge ngaphezu kohlobo lwe-A .
◎ Umbhobho weHDPE owomeleziweyo, kwiiprojekthi zesizwe nezamaphondo ezingundoqo, inani elikhulu lokusetyenziswa, ngakumbi kwiindawo ezingaselunxwemeni, iindawo zokuhlala ezingalinganiyo zikhona. Ummandla usetyenziswa ngokuqhelekileyo. Kwaye iHDPE engenanto udonga olumbethe umbhobho ngenxa yenkqubo kunye nolwakhiwo alunangqiqo, umbandela awunyanzelekanga ngokwaneleyo, ukhuseleko lobunjineli luphantsi kakhulu, kwaye kwezinye iindawo eziphambili zombhobho ojikelezayo odongeni, umbhobho wokujikeleza udonga ophantsi kakhulu. Ubunjineli buthintelwe ekusebenziseni, bekungasebenzi ngokubanzi kwiindawo zonxweme.
Akukho nzima ukugqiba kwelokuba ukusetyenziswa kwesokethi yohlobo lwe-electrofusion ye-HDPE eqinisiweyo yetyhubhu yeyona nto ibhetyebhetye, kwaye ujongano lungqongqo. ujongano, ukuqinisekisa zombini ujongano olutywiniweyo kunye nolwakhiwo oluxinzelelweyo. Ngexesha lokwakhiwa kweprojekthi, ukuba itafile yamanzi emseleni iphezulu, indawo ezinkulu zemvula zinzima, okanye ukuwa kunzima, kunokwenziwa emhlabeni Ukudibanisa imibhobho emininzi emseleni, engenakwenzeka ngeminye imibhobho, inokukhawulezisa inkqubo yokwakha, kwaye inokwenziwa ngale ndlela. Kwangelo xesha, kuthintela ukwakhiwa okuyingozi kunye nokunciphisa iindleko zokwakha.
Okulandelayo: Ityhubhu yentsimbi eyenziwe ngombala yentsimbi eyenziwe ngombhobho odibeneyo wokuhambisa amanzi
Umbhobho wamanzi ohambisa amanzi oludongeni kabini
Umbhobho wentsimbi Umbhobho Double Wall
HDPE Double Wall incence Khupha Pipe Machine
I-Hdpe Umbhobho wamanzi oManzi oMbane
Ukulahlwa kwelindle i-Hdpe kabini udonga oluthambileyo kumbhobho
PP udonga kabini umbhobho incence
HDPE udonga kabini umbhobho incence
Ibhendi yentsimbi yeHDPE iqinise umbhobho wamaplanga